2 mitambo iri kutengeswa iri kutengeswa iyo inokufadza | IPhone nhau
2 mitambo iri kutengeswa iri kutengeswa iyo inokufadza iwe
Isu takauya kuChina tichifara kwazvo, tichida kubata vhiki yevhiki, uye na mitsva inopa uye kukwidziridzwa saka unogona kuenderera uchinakidzwa ne iPhone yako kana iPad uchitsvaga zvinyorwa zvitsva mazuva ese, uchichengetedza mari shoma.
Uye kukukurudzira iwe munzira iyo yekuzorora kwevhiki, nhasi tinokumbira mitambo miviri inonakidza, akasiyana zvakanyanya kubva kune mumwe nemumwe, asi ndine chokwadi kuti uchaafarira. Ehe, iwe unofanirwa kukurumidza nekuti kupihwa ndekwenguva yakatarwa uye kunogona kupera chero nguva. Ndinovimba unonakidzwa nazvo!
1 Mini Hondo Kudzima magetsi
2 Kumba Kuseri
Mini Hondo Kudzima magetsi
Isu tinotanga yedu sarudzo yemapurogiramu nemitambo iri kutengeswa nhasi ne "Mini Wars Blackout," a minimalist dhizaini yehondo mutambo uye mune iyo yese «mini», iyo hondo, mauto ... Nedare rakanaka uye rekutanga dhizaini, uye zvinoshamisa manzwi iyo inopa yakawanda kwazvo inonyudza yemitambo ruzivo, iwe unofanirwa pona pakurwiswa nevavengi vazhinji muhondo dzinoyemurika dzichiita mashandisirwo akanaka ezvombo, zvombo zvinoputika uye masimba akasarudzika. Uye zvakare, unogona kukwikwidza shamwari dzako kuti uwane mamakisi epamusoro.
"Mini Wars Blackout" ine mutengo wenguva dzose we2,29 euros, zvisinei ikozvino unogona kuiwana mahara kwenguva pfupi.
«Kumba Kuseri» mune urikutora hunhu hwemupoteri akadzingwa munyika yake nemauto evapanduki. Asina pekugara uye akaparadzaniswa nemhuri yake yese, unofanirwa kugona kurwira kuti urarame nzara uye chirwere uye uwane kuchengetedzeka muEurope. Iwo mutambo unotaurira chaiyo chaizvo uye yazvino-nyaya nyaya iyo zvakare inopa akasiyana akasiyana zviitiko sezvo zviitiko zvinoitika zvichidaro zvisina tsarukano pakati pehuwandu hwenongedzo.
"Kumba Kuseri" kune mutengo wenguva dzose we3,49 euros, zvisinei ikozvino unogona kuzviwana pakutengesa kwe2,29 €
Kumba Kuseri3,49 €
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Kutengesa » 2 mitambo iri kutengeswa iri kutengeswa iyo inokufadza iwe